New York City chọrọ ugbu a ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi COVID maka nri ime ụlọ, mgbatị ahụ na ụlọ ihe nkiri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » New York City chọrọ ugbu a ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi COVID maka nri ime ụlọ, mgbatị ahụ na ụlọ ihe nkiri
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
A ga-etinyerịrị ihe ọhụrụ achọrọ site na Ọgọstụ na Septemba ma ọ ga-achọkwa ka ndị ahịa na-abanye ụlọ ọrụ ụfọdụ nwee opekata mpe otu ọgwụ mgbochi Covid-19.
New York City nwere otu n'ime ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi kachasị na mba ahụ.
Ihe dị ka 66% nke ndị okenye New York agbaala ọgwụ mgbochi ugbua.
New York steeti bụ otu n'ime COVID-19 kacha sie ike.
Ekwuputala atụmatụ ọhụrụ na-eme ihe ike iji nye ndị mmadụ ọgwụ mgbochi megide COVID-19 New York City Onye isi obodo Bill de Blasio taa.
Onye isi obodo NYC na -ekwenye na mmemme dị ka iri nri ime ụlọ na ịga mgbatị ahụ ga -abụ naanị maka ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi coronavirus.
Onye isi obodo ahụ kwupụtara na Tuesday, na-ekwu maka nchegbu maka ụdị Delta na-agbasa ngwa ngwa.
A ga-etinyerịrị ihe ọhụrụ achọrọ site na Ọgọstụ na Septemba ma ọ ga-achọkwa ka ndị ahịa na-abanye ụlọ ọrụ nwere opekata mpe otu ọgwụ mgbochi Covid-19. Enwere ike gosipụta nke a site na kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ngwa ịgba ọgwụ mgbochi.
De Blasio enwetaghị nkọwapụta etu aga -esi etinye iwu a. O kwuru na iwu a ga -amalite na Ọgọst 16, mana agaghị eme nyocha ruo Septemba 13.
Onye isi obodo kwukwara ọkwa na n'oge na -adịghị anya, a ga -achọ ka ndị ọrụ obodo niile gbaa ọgwụ mgbochi n'ọnwa Septemba, ma ọ bụ na ha ga -edo onwe ha ule kwa izu.
Ihe dị ka 66% nke ndị okenye New York agbaala ọgwụ mgbochi ugbua-otu n'ime ọnụego kachasị elu na mba-mana steeti bụ otu n'ime COVID-19 kụrụ.